धार्मिक सांस्कृिक – NepalajaMedia
९ लाख बाती बलेको फोटोलाई हातले छुनुहोस र ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस, सारा दुख पाप काटिनेछ र लक्ष्मी प्राप्ति हुनेछ धनकि खानी,धनको देवी मानिने लक्ष्मी मातालाई प्रसन्न गर्नको लागि मानिसहरु अनेक प्रकारको उपाय र कार्यहरु गर्ने गर्दछन् ।महालक्ष्मीको पूजा र आराधना गर्नाले धन र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास समेत रहेको छ ।हिन्दु धर्मअनुसार, यदि तपाई देवी लक्ष्मीलाई खुशी राख्न र उनलाई आफ्नो घरमा आकर्षित गर्न सक्षम हुनुभयो भने धन र समृद्धिले तपाइलाई कहिले पनि छोड्ने छैन ।देवी लक्ष्मी धन, भाग्य, प्रेम र सौन्दर्यकी देवीको रुपमा मानिन्छ। उनलाई चंचल स्वभावको पनि मानिन्छ किनकि उनि एकै ठाउँमा स्थायी रुपमा बस्न सक्दिनन् भन्ने विश्वास पनि रहेको छ । तपाईले दैनिक गर्ने केही कार्यहरुले लक्ष्मी माता प्रसन्न हुने र जीवनमा प्रशस्त धनलाभ गर्ने अवसर मिल्ने गर्छ। आज हामी तपाईहरुलाई लक्ष्मीको कृपा मिल्ने र धनलाभ हुने
काठमाडौँ । राती सुतेपछि सपना हरेक मानिसले देख्छ, तर त्यसलाई ब्युझिएर याद गर्नु भनेको अलि गाह्रो काम हो। कुनै बेला यदि हामीलाई सपना याद भइहाल्यो भने पनि दोस्रो व्यक्तिका साथमा शेयर गरिहाल्छौं, यद्धपि स्वप्नशास्त्रका अनुसार यसो गर्नु बिल्कुलै ठिक होइन। खासगरि एक बिशेष अवधिमा देखिएको सपनालाई अरुसंग शेयर गर्नु अशुभ हुन्छ। सपनामा भगवान देखेमा कसैलाई नसुनाउनुहोस् सपनामै भए पनि कुनै कुनै बेला हामीलाई प्र्त्यक्ष भगवानसँग भेट्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। तर, बिहान उठ्नासाथ यस्ता कुरा हामी साथीभाई या परिवारसँग शेयर गरिहाल्छौं। मान्यता अनुसार सपनामा भगवान देखेको कुरा कसैसँग शेयर गर्नुहुँदैन। यस्ता अनुभवहरुलाई सकेसम्म मनभित्र नै राख्नु आवश्यक हुन्छ। जान्नुहोस यसको राज हरेक जीवभित्र रहेको आत्मा परमेश्वको रुप हो, जसमा जीवित भगवानको दर्शन मिल्छ। यसको मतलब यो हो कि प्रकृतिले हामीसँग संचार य
काठमाडौं – धार्मिक शास्त्र एवम् ज्योतिषशास्त्रमा शंखलाई अत्यन्त महत्वपुर्ण मानिएको छ । पौराणिक कथाका अनुसार अमृत प्राप्तिकालागी समुन्द्र मंथनका समयमा प्राप्त भएका १४ रत्नमध्ये शंख समेत रहेको थियो । शंख कुबेरको प्रतीक मानिन्छ । साथै देवी लक्ष्मी र भगवान विष्णुको प्रिय मानिन्छ । यसलाई घरमा राखेमा सुख समृद्धि आउने विश्वास गरीन्छ । शंखलाई अलग अलग तरीकाले प्रयोग गर्दा ग्रह समेत प्रसन्न हुने गर्दछन् । ग्रहको अशुभ प्रभावबाट बच्न बार अनुसार शंखको प्रयोग गरे ग्रह अनुकूल बन्दछ । ज्योतिषमा सूर्य लाई मान सम्मानको कारक मानिएको छ । यदि कसैको कुण्डलीमा सूर्य कमजोर भएमा उसको सम्मानमा ठेस पुग्न सक्छ । साथै पिताको सम्बन्धमा समेत दरार आउन सक्छ । सूर्यको स्थिति अनुकूल बनाउन आइतबार शंखमा जल भरेर सूर्य देवलाई अर्घ्य दिनु पर्दछ । सोमबारलाई भगवान शिव र चन्द्र ग्रहको बारको रुपमा मानिन्छ । दूधलाई चन्द
काठमाडौं– हिन्दूधर्मअनुसार मंगलबार विशेष गरी गणेश भगवानको पूजाआराधना गरिन्छ । यस दिन काली माता, दुर्गा माता र हनुमानको पनि पूजा गरिन्छ । यस दिन व्रत बस्दा बिहानको खाना खानु हुँदैन भने साँझको खानामा नुन मिसाउनु हुँदैन । सबै किसिमको सुख प्राप्त गर्न, रक्तविकार शमन गर्न, शत्रु दमनका निम्ति, स्वास्थ्य रक्षार्थ तथा पुत्र प्राप्तिका लागि मंगलबारको व्रत उत्तम मानिन्छ । यो व्रत शुक्ल पक्षको पहिलो मंगलबारबाट शुरु गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो व्रत कम्तिमा २१ वटा मंगलबारसम्म लिने प्रचलन छ भने सकेसम्म जीवनभरी नै लिए अझ राम्रो हुन्छ । मंगलबारको व्रतमा गहुँ र सख्खरको भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने रातो कपडा धारण गर्नु पर्छ । मंगलबारको व्रतबाट मंगल ग्रहको अनिष्ट फल पनि शान्त हुन्छ । मंगलबार गणेश भगवानको आराधना गर्दा ‘ॐ भौमाय नमः’ मन्त्रसहित जप गर्नुपर्दछ । पूजा गर्दा रातो फूल, फल, तामा, नरिवल आदि फल दान गर
काठमाडाैं, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन (यही माघ १५गते) हिन्दू धर्मावलम्बीले स्वस्थानी व्रतकथा तथा माधवनारायणको पूजा आराधना आरम्भ गर्दैछन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना हरेक दिन घरघरमा स्वस्थानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ।स्वस्थानी व्रत बसे तथा कथा भने र सुने म’नोकाङ्क्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। माधवनारायण स्वस्थानी व्रत तथा शालीनदी सुधार समितिले नयाँ नियमसहित मेला व्यवस्थापनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। कोभिड– १९ को महामारीका कारण यही माघ १५ गतेदेखि एक महिनासम्म चल्ने शालीनदी मेलाका लागि समितिले ५० व्रतालु राख्ने गरी पूजा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाएको समितिका अध्यक्ष मिजेन्द्रकाजी श्रेष्ठले बताए। उनले भने, “मेलामा जम्मा ५० जना व्रतालुलाई समावेश गरिनेछ, व्रत बस्न इच्छुक हुनेले भोलि (सोमबार) सम्म आवेदन दिनुपर्नेछ, व्रत बस्नका लागि २० देखि ५०
काठमाडौँ। भगवना वेदव्यासद्वारा रचित महाभारतमा सम्पूर्ण धर्म, दर्शन, समाज, संस्कृति, युद्ध र ज्ञान-विज्ञानका कुराहरु उल्लिखित छन्। महाभारतमा संस्कारका लगभग सम्पूर्ण कुराहरु छन्। षड्यन्त्रले भरिएको यस कहानीका गर्भमा धेरै रहस्यहरु छन्। जसले त्यस समयमा वास्तवमै यस्तो भएको थियो होला त भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछ। जस्तो गान्धारीका १०१ सन्तानसँग सम्बन्धित आश्चर्य पार्ने तथ्य। सामान्यतया: कुनै पनि महिलाले एक या जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिन्छन। ३-४ या ५ बच्चा जन्मिएका एकाध घटनाहरु सुन्न पाइन्छ। महाभारतकी नारी पात्र गान्धारीले १०० पुत्र र एक पुत्रीलाई एक साथ जन्म दिएकी थिईन। उनको सबैभन्दा जेठो सन्तान दुर्योधन महाभारतमा प्रमुख खलनायकको रुपमा चिनिन्छन। उनका पुत्रहरु कौरवको नामले चिनिन्छन्। गन्धार नरेशकी पुत्री गान्धारी शिवको ठुलो भक्त थिईन। भगवान शिवले उनको तपस्याबाट प्रसन्न भएर १०० पुत्रका माता बन
शुक्र ग्रहलाई प्रेमको कारक ग्रह मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार कुण्डलीमा शुक्रको स्थितिका कारण सम्बन्ध बन्ने वा बिग्रने गर्दछ । तर सन् २०२१ मा ७ राशीले भने शुक्रको कृपाको कारण प्रेममा विशेष सम्बन्ध रहनेछ ।यो वर्ष ती ७ राशीले सच्चा प्रेम पाउने, विवाह बन्धनमा बाधिने र जीवनमा रोमान्स रहनेछ । कुन कुन राशी हुन् त ती ? मेष राशी=मेष राशिका जातक सिंगल छन् र प्रेमको खोजीमा छन् भने सन् २०२१ को बर्षमा उनले विशेष मानिस भेट्ने संभावना प्रबल छ । यो बर्षमा प्रेममय जीवन बिताउने उत्तम समय रहेको छ । विवाहितले सुखद् दाम्पत्य जीवन बिताउने छन् । सम्बनध जोडिएकाहरुको पनि यो बर्ष सुमधुर जीवन रहनेछ । तथापी पार्टनरसंग नकारात्मकता कुरा गर्नबाट बच्नुहोस् । वृष राशी=वृष राशीका जातककालागी सन् २०२१ को वर्ष सम्बन्धमा प्रेम र उत्साह लिएर आएको छ । सिंगलको जीवनमा खास व्यक्तिको आवागमन हुने संभावना प्रबल छ । यस बर्ष विपरीत
काठमाडौँ । हिन्दु धर्म ॐ लाई म’हामन्त्र मानिन्छ । कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ । ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो म’न्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ । ओम् उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न स’हयोग पुर्याउँछ । यसले धेरै विरामीहरु ठिक हुने कुरा वै’ज्ञानिक अ’नुसन्धानबाट प्र’माणित भइसकेको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, १) थाइराइड:हरेक दिन ओम्काे उच्चारण गर्दा थाइराइडको स’मस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । २) एन्जाइटी:ओम्काे उच्चारणले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ । यसको उच्चारणले तनाव, ड’रजस्ता स’मस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । ३) स्ट्रेस वा टेन्सन:ओम् मन्त्रको जप गर्दा मानसिक शान्ति मिल्छ ।यसले चिन्ता, तनाव, मानसिक थकानलाई टाढै राख्छ ।४) ब्लड सर्कुलेसन :ओम्काे उच्चारणले शरीरमा ब्लड सर्कुल
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ प
मानिसहरु घरलाई आर्कषक र राम्रो बनाउनको लागी घरमा विभिन्न किसिमका आकर्षक खालका सामानले सजिसवाज गर्ने गर्दछन्, जसले घरलाई निकै सुन्दर बनाएको हुन्छ । तर वास्तु शास्त्रमा घरमा कस्ता समान राखेर मात्र सजाउन मिल्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । घरमा राख्न नहुने समान राखेमा घरमा निकै हानी गर्दछ । हिन्दुशास्त्रमा मात्र नभएर चिनियाँ संस्कृतिमा पनि वास्तुशास्त्रको विश्वास गरिएको छ । घरको सुख शान्तीको लागी चीनमा धेरैले चीनमा फेंगशुई घरमा सजाएर राख्ने गर्दछन्। यसैप्रति त्यहाँका नागरिकले विश्वास गरेका छन्, उनीहरुको धारणा के छ भने फेंगशूई घरमा राख्नाले घरमा सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ । पछिल्लो समयमा फेंगशूई प्रति केहि नेपालीहरुले पनि आकर्षितको साथमा यसप्रति विश्वास लिन पनि थालेका छन् । १ लाफिङ बुद्ध कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन् भने लाफिङ बुद्ध घरमा राद्यन सक्नुहुन्छ, यसला